Chencan GM3060T Big အရွယ်အစား5ဝင်ရိုးတန်းမှိုထုတ်ယူခြင်းရေးစင်တာ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chenan Machinery
Chencan GM3060T Big အရွယ်အစား5ဝင်ရိုးတန်းမှိုထုတ်ယူခြင်းရေးစင်တာ
1. စက်ရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကိုအောင်မြင်ရန်ကွန်ပျူတာ-ကိုကူညီခဲ့ဒီဇိုင်း်ပေးရန်။ ရွှေ့ပြောင်း gantry နှင့်ပုံသေစားပွဲပေါ်မှာ mode ကိုအသုံးပြုပုံမြေတပြင်လုံးစက်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအားဖြည့်နှင့်အတူ welded ဖြစ်ပါတယ်။ အာူးနံရိုးအတွင်းပိုင်း welded နေကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးကုသမှုအတော်များများဖြစ်စဉ်များကိုအလွန်တပြင်လုံးကိုစက်ရဲ့ကျောမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးသည်ပုံပျက်နေသောခံရဖို့လွယ်ကူသော, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်သမကုသမှုအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌;
2. Z ကိုဝင်ရိုးခက်ခဲပစ္စည်းများအဘို့အမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရသောအခါအလုပ်ကိုခွင့်ပြုပါရန်မိုးသည်းထန်စွာဒီဇိုင်းကိုအသုံးမွငျ့မားတိကျစွာ TBI မြင့်မားသောတိကျဘောလုံးကိုဝက်အူနဲ့မြေတပြင်လုံး Z နဲ့ဗိုင်းလိပ်တံငွေပမာဏကိုပန်းကန်ချမှတ်;
3. လမ်းညွှန်ရထားလမ်းနှင့်ထိန်သိမ်းမြေမှုန့်အထောက်အထားအတွင်းပိုင်းဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ဖုန်မှုန့်အထောက်အထားဒီဇိုင်းကိုစင်ကြယ်သောသူတို့ကိုစောင့်တော်မူမည်
4. Z ကိုဝင်ရိုးထိထိရောက်ရောက်မော်တာရဲ့တင်ပါဝါလျော့ကျစေပါတယ်နှင့်စက်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့ထားတဲ့ Dual-နိုက်ထရိုဂျင်ချိန်ခွင်လျှာဆလင်ဒါပုံစံဒီဇိုင်း, ကိုအသုံးပြုပါ။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်လေဖိအားစက်သုံးတတ်၏
စစ်ဆင်ရေးကိုပိုပြီးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကို USB connection ကိုများနှင့်ပြတင်းပေါက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအပူလဲလှယ်မှုစနစ်နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူ 5.Taiwan Syntec5ဝင်ရိုးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ;
6. T က slot ကပုံပျက်ခံရဖို့မလွယ်ကူပါဘူး, မြင့်သောသမပိုင်းကုသမှုအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို, သံအလုပ်စားပွဲပေါ်မှာသွန်းလေ၏။ တဦးတည်းအပိုင်းအစစားပွဲပေါ်မှာများအတွက် max ကိုအရှည်ကွန်တိန်နာအတွင်း fit နိုင်ရန်အတွက်2မီလီယံဖြစ်၏
7. ထိုကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးကိုအတူတပြင်လုံးကိုစက်သေချာစေရန်အလိုအလျောက်ရေနံစနစ်, အော်တိုရေနံခိုးအငွေ့စနစ်, chiller နှင့်အတူအလိုအလျောက်ဗိုင်းလိပ်တံအေးစနစ်, ဂျာမဏီ Igus cable ကို, အကာအကွယ်ရှေ့ & ပြန်တံခါးကို ... အားလုံးဒီဇိုင်းအဖြစ်အခြားဒီဇိုင်းနှင့်ကျွန်တော်ထိပ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုဖို့အပိုပစ္စည်းများ, စွမ်းဆောင်ရည်;
• XYZ အလုပ်အဖွဲ့အရွယ်အစား: 3000mm * 6000mm * 2100mm;
•ဗိုင်းလိပ်တံ: အီတလီနိုင်ငံ 15Kw ဗိုင်းလိပ်တံ5ဝင်ရိုးခေါင်းကိုလှည့်တပြင်လုံးကိုထားနှင့်အတူ (က± 120 °, C, 360 °±);
•ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း: 24000rpm / မီတာ;
•ဂျပန် YASKAWA servo မော်တော်နဲ့ drive ကို system ကို;
အစစ်အမှန်5ဝင်ရိုး function ကိုအတူ•ထိုင်ဝမ် Syntec5ဝင်ရိုးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ;
• XY ဝင်ရိုး: တင်သွင်း helical ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးဂီယာ ;;
• Z ကိုဝင်ရိုး: ထိုင်ဝမ် TBI ပိုမိုမြင့်မားတိကျစွာဘောလုံးကိုဝက်အူ;
• XYZ: ထိုင်ဝမ် HIWIN6အဆင့်ကိုစတုရန်းရထားလမ်း;
• Tool ကိုမဂ္ဂဇင်း: 8 tool ကိုကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူ Linear အမျိုးအစား tool ကိုမဂ္ဂဇင်း,
•နိုက်ထရိုဂျင် pneumatic system ကို;
•အခြားလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ Schneider သို့မဟုတ် Siemens သုံးတတ်၏
1. သေစက်မှုလုပ်ငန်း: အမြှုပ်, ပလပ်စတစ်, PVC, သစ်သား, ဖိုက်ဘာမှန်နဲ့အခြားသတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများမဆိုပန်းပု;
2. မှိုစက်မှုလုပ်ငန်း: မဆိုအမျိုးအစားကားတစ်စီးမှို, လှေမှို, foundry မှို, လေကြောင်းမှို, DIA မှို, etc;
ယခင်: Chencan GM1530T5ဝင်ရိုးတန်း CNC Router စက်
နောက်တစ်ခု: Chencan BS1325B မှိုထွင်းထုခြင်း Router စက်
Chencan GM3560T Big အရွယ်အစား5ဝင်ရိုးတန်းမှို CNC Rou ...
Chencan GM1530T5ဝင်ရိုးတန်း CNC Router စက်